မတူပီရွာတချို့ကိုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်လို့ ဒေသခံများ စိုးရိမ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
မတူပီရွာတချို့ကိုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ညမထွက်ရ အမ...
10 ก.พ. 2562 - 11:57 น.
(၁) ရွာတချို့ကိုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ညမထွက်ရအမိန့်ကြောင့် မတူပီမြို့ခံများ စိုးရိမ်
ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့ပေါ်နဲ့ ရွာတွေချင်းဆက်တဲ့ လမ်းကြောင်း ညနေပိုင်း ၅ နာရီကနေ မနက်ပိုင်း ၇ နာရီအထိ သွားလာတာ မလုပ်ဖို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့က အမိန့် ထုတ်ပြန်တာကြောင့် မတူပီ ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (Chin Human Right Organization) က ပြောပါတယ်။
မတူပီမြို့က ချင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက် ကောက်ယူရေး တာဝန်ခံ Salai Terah " အရင်တုန်းက ဒီလို မဖြစ်ဖူးဘူး။ အခုတော့ ဒေသခံတွေက စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့။ အဲဒီလမ်းကြောင်းက မတူပီနဲ့ ဟားခါးလမ်းကြောင်းဆိုတော့ ကြားထဲမှာ ရွာတွေက အများကြီးပဲ " လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် ဘာတွေ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ
ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့က အဲဒီအမိန့်ကို မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေ Nga Leng ကျေးရွာနဲ့ Pha Neng ကျေးရွာအပါအဝင် မတူပီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက် (၄) ခုက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အစည်းအဝေးခေါ် ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Salai Terah က ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
ညနေ ၅ နာရီကနေ မနက် ၇ နာရီအထိ မသွားလာရ အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ မတူပီနဲ့ Nga Leng ကျေးရွာကြားမှာ စစ်တပ်တွေရှိပြီးတော့ အဲဒီသတင်းမထုတ်ပြန်ခင်မှာ စစ်ကား ငါးဆယ်ကျော်လောက် မတူပီမြို့ကို ရောက်လာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
(၂ ) တောင်နဝင်းဆည်ဘောင် မြေသား ၆ လက်မနိမ့်
ပဲခူးတိုင်း ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ထဲက တောင်နဝင်းဆည်ဘောင်က မြေသား ၆ လက်မလောက် နိမ့်ဆင်းသွားပြီး အက်ကွဲရာတွေ ပေါ်လာလို့ ဒေသခံတွေကြား စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ပါတယ်။
ဆည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မရှိဘူးလို့ အစိုးရဘက်က ထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် ဒေသခံတွေကတော့ နေ့ရောညပါ ဆည်ဘောင်ပေါ်တက်ပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဒေသခံ တဦးက ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်ကတည်းက ဆည်ကျိုးသွားပြီ ဆိုတဲ့ ကောလာဟလကြောင့် ဆည်အောက်က ရွာတွေသာမက ပေါက်ခေါင်းမြို့ပေါ်မှာပါ လူတွေ ပြေးလွှားရှောင်တိမ်းခဲ့ကြရတယ်လို့ ပေါက်ခေါင်းဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
အစိုးရဘက်ကတော့ ဆည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေအရ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
နှစ် ၂၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ တောင်နဝင်းရေလှောင်တံကို ဂျပန်နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ဂျပန်နဲ့ မြန်မာပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်နဝင်းဆည်ရဲ့ အောက်ဘက်မှာ တည်ထားတဲ့ ရွာသုံးရွာရှီပြီး ပေါက်ခေါင်းမြို့ပေါ်နဲ့လည်း ၂ မိုင်သာ ကွာဝေးတာကြောင့် ဆည်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါက ဒေသခံ ၇၀၀၀၀ ခန့် ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
(၃) ဖိလစ်မင်းသားကြီး ကားမောင်းလိုင်စင်စွန့်လွှတ်
ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးရဲ့ အသက် ၉၇ နှစ်အရွယ် မင်းသားကြီး ဖိလစ်ဟာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့ရဲ့ ကားမောင်းလိုင်စင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ ဘာဂင်ဟမ်နန်းတော်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို စွန့်လွှတ်ဖို့ မင်းသားကြီးဟာ သေချာဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ ဘာဂင်ဟမ် နန်းတော်က ပြောပါတယ်။
ဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သတင်းသုံးပတ်က ဆန်ဒရင်ဂမ် ဥယျာဉ် အိမ်ယာအနားမှာ ကိုယ်တိုင်မောင်းတဲ့ကားနဲ့ တခြားကားကို တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီတိုက်မှုကြောင့် လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရကာ လက်ကောက်ဝတ်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မင်းသားကြီးဟာ သတိမေ့လျော့တာတွေ မရှိခဲ့ပေမယ့် အလွန်အင်မတန် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက် မင်းသားကြီးအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးနဲ့ ကြင်ယာတော် မင်းသားကြီးတို့ဟာ ခရစ္စမတ်ကာလကတည်းက ဆန်ဒရင်ဂမ် ဥယျာဉ် အိမ်ယာမှာ နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မတူပီရွာတချို့ကိုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်လို့ ဒေသခံများ စိုးရိမ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ